ADY AMIN’NY TSY FANDRIAMPAHALEMANA: Basy tsy ara-dalàna 2500 no sarona tao anatin’ny 2 taona – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:17
Anarivony ireo basy saron'ny zandary.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/ADY AMIN’NY TSY FANDRIAMPAHALEMANA: Basy tsy ara-dalàna 2500 no sarona tao anatin’ny 2 taona
ADY AMIN’NY TSY FANDRIAMPAHALEMANA: Basy tsy ara-dalàna 2500 no sarona tao anatin’ny 2 taona
Velirano voalohan’ny Fitondram-panjakana ny fametrahana ny fandriampahalemana maharitra eto amin’ny tany sy ny Firenena. Fositry ny tsy fandriampahalemana ny fiparitahan’ny basy. Ezaka natao ny hahazoana ireo basy, ka isan’ny nahazoana basy hatrany amin’ny 2500 manerana ny Nosy, tao anatin’ny roa taona…
Rado Harivelo 3 décembre 2020
Anarivony ireo basy saron’ny zandary.
Sambany teo amin’ny tantaran’ny Firenena sy ny tantaran’ny Faritra Matsiatra Ambony, ny fahazoana basy maro dia maro tany an-toerana. Amin’ireo basy miisa 2500 mahery azo manerana ny Nosy, ny taona 2019-2020, dia basy miisa 2129 no azo tao anatin’ny faritanin’i Fianarantsoa. Ny 1657 amin’izany no tao amin’ny Faritra Matsiatra Ambony, izay lohalaharana amin’ny fahazoana basy tsy manara-dalàna. Nahitana basy mahery vaika miisa 125, basim-borona miisa 102 ary basy vita tanana mahatratra 1902. Tamin’ireo basy mahery vaika dia nahazoana kalachnikov miisa 51 ka ny 30 amin’ireo mbola azo nampiasaina tsara rehefa avy natao fanandramana, ka hozaraina amin’ireo tobin’ny Zandary, izay tokony homena izany, fa ny ambony kosa, mbola mila fanamboarana. Nopotehina imasom-bahoaka omaly, ireo fitaovam-piadiana ireo, izay natrehin’ny Kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena, ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa, ny Governora any an-toerana, ny OMC, ireo depiote lany any an-toerana sy ireo Ben’ny Tanàna. Nahitam-bokany ny ezaka niainga avy amin’ny Fitondram-panjakana foibe, izay notarihin’ny Filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina, nipaka tany amin’ny Faritra, ny Kaominina, eny, hatreny amin’ny Fokontany mihitsy aza.
Tonga nanatrika izao fotoana izao ny Governora any an-toerana
Taorian’ny fidinana ifotony nataon’ny Praiminisitra lehibe’ny governemanta, Ntsay Christian sy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena ary ny Sekreteram-panakana miadidy ny Zandarimaria, dia notarihin’ny Governora ny Fametrahana ny paikady fampandriam-pahalemana, miaraka amin’ny OMC, ny Solombavambahoaka ary ireo Ben’ny Tanàna sy ny Vondrombahoaka eny ifotony. Dingana iray no vita, fa asa lavitra ezaka no hitazonana ny fandriampahalemana maharitra. Tsy hijanona hatreo ny fanentanana ho amin’ny famerenana basy an-tsitrapo ataon’ny eo anivon’ny Faritra, arahin’ny fizarana hanam-pamokarana, izay fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombona antoka. Efa eo am-pametrahana koa ny Fikambanana Soa Miray Dia, isaky ny distrika hiara-kiasa amin’ny mpitandro filaminana.
Nirosoana ny famotehana ireo basy tratra.
Tsy mijanona fotsiny amin’izao, fa mifanindran-dàlana amin’izany rehetra izany, ny asa fampandrian-tany tontosain’ny mpitandro filaminana, toy ny hetsika manokana ; ny fametrahana fotodrafitrasa tahaka ny Toby miaramila, Kaompanian’ny Zandarimaria ; sy ny Kaomisaria. Tanjona ny hiainan’ny vahoaka ao anatin’ny fiarahamonina milamina, mba hisian’ny fampandrosoana. Isan’ny fandaharanasan’ny Fitondram-panjakana, izay tafiditra ho vaindohan-draharaha, ny hahafaha-mitady amin’ny asan-jiolahy sy dahalo, ary hamerenana haingana ny fandriampahalemana eto Madagasikara, indrindra ny fampiharana ny tany tan-dalàna.
Tanjona ny hamerenana ireo mitazona basy tsy ara-dalàna, na eo am-pelatanan’olon-tsotra ka tsy misy taratasy mazava. Efa nisy rahateo, hetsika notontosain’ny Tafika Malagasy, tamin’ny 2019, ny amin’ny famerenana ireny basy tsy ara-dalàna tsy misy arakaraka. Rehefa mihena ny fiparitahan’ny basy tsy ara-dalàna eny am-pelatanan’ireo olon-dratsy, dia manao randran-tarihiny koa ny fihenan’ny lafiny tsy fandriampahalemana, izay antoky ny fampandrosoana maharitra eto amin’ny Firenena.
2 085 MBOLA TSABOINA, 275 « FORMES GRAVES » Misokatra ny CTC-19 Mahamasina, hentitra amin’ny fampanajana fepetra ny Praiminisitra
“ORTM MIBANJINA NY AMPITSO”: Nohavaozina ho maoderina tanteraka ny RNM sy ny TVM
FANDANIAN’NY DEPIOTE NY LFI 2021: Dingana mankany amin’ny fanarenana ny toekarena
VIDIM-PANAFODY ARA-DRARINY: Hatao peta-drindrina eny amin’ny farmasia manomboka ny zoma izao
PRAIMINISITRA NTSAY CHRISTIAN: Manamafy ny tokony hisian’ny fitoniana eto amin’ny Firenena